215 macalimiin ah oo doonaya inaan laga wareejin xarumaha ay ka shaqeyaan – The Voice of Northeastern Kenya
215 macalimiin ah oo doonaya inaan laga wareejin xarumaha ay ka shaqeyaan
Qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada dalka oo gaaraya 215 ayaa ururka qaran ee macalimiinta KNUT ka codsaday inuu ku dadaalo sidii looga laaban lahaa go’aankii looga wareejiyay xarumihii ay ka howlgalayeen.
Xoghayaha guud ee ururkan dhanka xildhibaan baarlamaanka si magacaabid ah ku galay Mr.Wilson Sossion ayaa warbaahinta u sheegay inay barayaasha codsiyo soo gudbiyeen.
Mr. Sossion ayaa intaasi ku daray inuu dhawaan warbixin u gudbin doono guddiga dhexdhexaadinta ee ay bishii hore soo magacawday wasaaradda shaqaalaha.
Maxkamadda shaqaalaha ee dalka ayaa maalmo ka hor guddiga adeegga macalimiinta ee TSC iyo ururka qaran ee barayaasha ee KNUT ku amartay inay wada xaajodaan kadibna ay ugu dambeyn 30-ka bishan ku soo wareejiyaan warbixin ku saabsan arrimaha ay ku heeshiyeen.
Guddiga TSC iyo ururada macalimiinta dalka ayaa weli isku maandhaafsan arrimo ay ka mid yihiin tallaabada maamulayaasha looga wareejinayo dugsiyada ay ka shaqeynayeen in ka badan sagaal sano.
Sido kale KNUT ayaa doonaysa in la dallacsiiyo in ka badan 30,000 oo macalimiin ah oo darajada barayaasha loo kordhiyo aanan lagu saleyn waxqabadkooda.
Sannadkii hore ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta uu guddiga TSC ku amray inuu dib u eegis ku sameeyo barnaamijyada uu ku guda jiro ee ay macalimiinta dalka ka soo horjeesteen.
Hasa ahaate madaxa fulinta ee TSC Mrs. Nancy Macharia ayaa ku doodaysa in macalinka oo kadib markii uu sannado badan hal deegaan ka howlgalo ismaamul kale loo wareejiyo ay kaalin muhiim ah ka qaadaneyso xoojinta midnimada iyo isdhegalka bulshada.
← Madaxweynaha dalka oo soo saaray amarro la xariira amniga
Abbe laba gabdhood oo uu dhalay ku dilay xaafadda Shauri Moyo →